Dal maxaabiista ka mamnuucay inay yeeshaan xiriir jaceyl oo cusub - Bulsho News
Muxuu gantaalka culus ee K/ Waqooyi tijaabisay uga dhigan yahay...
Ayman al-Zawahiri: Dhakhtarkii qalliinka indhaha ee noqday hogaamiyaha ugu sarreeya...
Gabar 17-jir ah ayaa qiratay inay jaceshahay dilaaga Peter Madsen
Dowladda Denmark ayaa baarlamaanka horgeysay sharci maxaabiiska ku xukuman xabsi daa’inka ka mamnuucaya inay xiriir jaceyl yeeshaan dadka aysan hore u aqoon 10-ka sano ee ugu horreeya noloshooda xabsiga, iyo inay dembiyadooda kaga faalloodaan baraha Internet-ka.
“Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay kiisas aad u xun oo ah in maxaabiis dembiyo halis ah galay ay xiriir la yeeshaan dad dhalinyaro ah si ay laxow iyo damqasho uga helaan. Tani waa in gebi ahaanba la soo afjaraa,” ayuu yiri Wasiirka Caddaaladda Denmark Nick Hakkerup.
Inkastoo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ay ka soo horjeedaan, haddana waxaa loo maleynayaa in xildhibaannadu ay ansixiyaan isla markaana uu sharcigan dhaqan galo January 1, 2022.
Sharcigan ayay dowladdu la timid kaddib markii 49-jirka Peter Madsen, oo ku xukuman xabsi daa’in kaddib dembiyo khatar ah oo uu geystay, kuna jira xabsiga Herstedvester ee Copenhagen uu December 19, 2019 guursaday Jenny Kurpen oo ah 39-jir u dhalatay Ruushka.
Dhacdadaas kaddib, Camilla Kurstein oo 17-jir ah una dhalatay Denmark ayaa shaacisay inay jeceshahay Madsen, ayna ka xun tahay xiriirka Kurpen.
“Xiriirkan waa in la soo afjaraa,” ayuu yiri Wasiirka Caddaaladda Denmark Nick Hakkerup. “Dembiilayaasha xukuman waa inaysan xabsiyada u weecin xarumo shukaansi.”
Kiis caan noqoday
Taariikhdu markay ahayd August 10, 2017, Madsen ayaa dilay weriyihii caanka ahayd ee Denmark u dhalatay Kim Vall, taas oo u timid si ay wareysi uga qaaddo. Waxay xirfad ahaan aad u xiiseyneysay hab hindiseedka Madsen: isaga qudhiisa ayaa sameeyay markab yar oo badda hoosteeda lagu galo.
Dembigan ayuu geystay iyagoo saaran isla markabka UC3 Nautilus. Madsen ayaa cad cad u jaray meydka weriyaha isla markaana ku daadiyay badda.
Markii hore, wuu beeniyay arrintaas wuxuuna sheegay in wareysiga kaddib uu weriyaha geeyay xeebta, balse dembiga ayuu qirtay kaddib markii baddu ay soo tuftay qeybo ka mid ah meydka weriyaha iyo xubno kale oo baco lagu riday.
Madsen kama uusan hadlin waxa ku kallifay dilka, balse wuxuu keliya ku soo celceliyay inuu falkaas geystay. Baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaaday inuu maskaxda ka xanuunsan yahay.
Suurtogal ma ahayn in la ogaado qaabka uu u dilay Vall, maaddaama meydkeeda uu in muddo ah ku jiray biyaha badda.
Xigashada Sawirka, Tom Wall
Weriyaha Sweden u dhalatay Kim Wall ayaa Peter Madsen ugu tabtay badda dhexdeeda si ay u wareysato
Bishii April 2018, maxkamadda ayaa ku xukuntay xabsi daa’in.
Waa tuma Jenny Kurpen?
Xaaska haatan ee Madsen waxay ku dhalatay kuna barbaartay Moscow. waxay ahayd weriye la shaqeyneysay barta mucaaradku leeyihiin ee Grani.ru, kaddib markii ay maamulku xireen bartaas waxay noqotay fannaanad.
Kurpen iyo seygeedii hore, Aleksey Devyatkin oo isna Ruushka u dhashay, oo ay u dhashay labo carruur oo yar yar ayaa waxay la jireen xisbigii Ruushka laga mamnuucay ee National Bolshevik Party, oo uu aasaasay qoraagii geeriyooday Eduard Limonov.
Sanadkii 2012, Kurpen iyo Devyatkin ayaa loo xiray inay ka qeyb galeen isu soo baxyo, kaddibna waxay tageen Ukraine, oo ay uga sii gudbeen Finland, oo ay ka heleen magangalyo siyaasadeed.
Wax yar kaddib maxkamadeyntii Madsen, Kurpen ayaa billowday mashruuc ay ugu magac dartay “Kani maaha Peter-ki aan naqaannay” waxayna ku soo bandhigtay Internet-ka.
Sanadkii 2018, waxay sheegtay in mashruuceeda uu u baahan yahay inay toos ula xiriirto Madsen iyadoo kaddibna la hadashay. Mar dambe, waxaa loo oggolaaday inay booqato.
Kurpen ayaa kaddib barta Facebook ku shaacisay inay is guursanayaan Madsen, waxayna sheegtay in markaas kaddib ay heshay farriimo lagu cambaareynayo.
Waxay ku adkeysaneysaa inay jeclaatay Madsen intii uu socday wada hadalkooda, isla markaana uusan guurku ka mid ahayn mashruuceeda.
Waxay sidoo kale beenisay fekerka ah in haweenku ay jeclaadaan ragga dila haweenka kale.
“Ninkeygu wuxuu geystay dembi xun waana lagu ciqaabay. Balse, markii aan bartay, waxaan xaq u leeyahay inaan ku dhawaaqo inaan ku faraxsanahay inaan la noolaado ninka ugu quruxda badan, ugu caqliga badan uguna daacadsan.” ayay ku tiri qoraal ay soo dhigtay Facebook.
Markii uu xabsiga galay, Madsen ayaa durba furay xaaskiisii hore, oo ay isla noolaayeen tan iyo sanadkii 2011. Iskuma aysan dhalin wax carruur ah. Barta BT ee dalkaasi Denmark laga leeyahay ayaa sheegtay in tan iyo August 2018, uu Internet-ka ka raadinayay saaxiibbo iyo xiriir jaceyl.
DAAWO: Senator Dhagdheer oo shaaciyey qorshe yaab leh...
WARBIXIN: Saxiixyada Laga Yaabo In Ay Dhacaan Suuqa...
Covid antiviral pill halves hospitalisations and deaths, maker...
Sir Alex Ferguson Oo Magacaabay Xiddiga Ugu Cad-Cad...
Waa Kuma Cabdi Xaashi Oo Markale Loo Doortay...
‘He lives freely, I live in fear’: the...
Edouard Mendy Oo Ka Fal Celiyay In Aan...